लोकप्रिय नायिका रेखा थापाको नजरमा भ्यालेन्टाइन डे (पढ्नुस पुरा लेख) « रंग खबर
लोकप्रिय नायिका रेखा थापाको नजरमा भ्यालेन्टाइन डे (पढ्नुस पुरा लेख)
भ्यालेनटाइन डे !! १४ फेबुररी अर्थात प्रेम दिबस , यो दिबस आज दुनियाँ भरि मनाइदै छ। जुन देश मा जुन भाषा बाट बोलिए पनि आखिर त्यो शब्द हाम्रो नेपाली भाषा मा ” मायाँ ” नै हो र आज माया , प्रेम अभिव्यक्ति दर्साउने दिन भनेर नै मैले पनि बुझेको छु।
१८ औ सताब्दी मा अंग्रेज देशहरुमा भ्यालेनटाइन दिबस एउटा सार्ब्रजनिक बिदा को दिन हो जुन क्रिस्चियन शहिदहरु को सम्मान मा दिईन्थो जसमध्ये एक सहिद सेन्ट भ्यालेनटाइन थिए। यो दिवसको सुरुवात Christian and Christian-influenced cultures बाट भएको हो।
क्रिस्टीयानिटि बाट सुरु भएता पनि आज यो दिबस लगभग संसारभरि का मानिसहरु ले मनाउदै आएका छन् , कुन धर्म र वर्ग का मानिस हुन् मतलब छैन। यो पनि मतलब छैन कि यो दिबस कहाँ बाट र कसरी सुरु हुन पुग्यो। यस को मतलब हुन आउछ , संसार लाई युद्ध र हतियार ले होइन माया प्रेम र आपसी सद्भाव ले नै बदल्न सकिन्छ। युद्ध र हतियार ले कुनै पनि कुरा सजिलै जित्न सकिन्छ तर माया ले र सद्भाव ले जितेको जित लामो र आनन्ददाइ हुन्छ , रिस, राग र बैमनिस्यता कदापी हुदैन।
आज को संसार माया मा होइन , हतियार , पैसा र युद्धमा विश्वास गर्छ त्यसैले नै गर्दा आज मानबियता मा होइन, मान्छे पावर मा विश्वास गर्छन , एक अर्का लाई गन्दैनन , आफै ठुलो , “म र मेरो “मात्र भन्ने भाबना बढदो छ। ” हामी र हाम्रो ” भन्ने भाबना आज लगभग संसार भरि को मानिसहरु मा समाप्त भएर जादै छ। आज मानिसहरुमा त्यो यो देश को, त्यो फलानो धर्म को र त्यो यो राजनीतिक पार्टी को र त्यसलाई जसरि हुन्छ समाप्त पार्नु पर्छ नत्र मैले सफलता पाउदिन भन्ने धेरै नकारात्मक सोच ब्याप्त छ। हो यो नै एउटा मानबता भन्दा पर र क्रुरता को पछाडी छ आज को संसार।
मलाई लाग्छ , आजको यो प्रेम दिबससंगै सबैसंग दुस्मनी , रिश र राग छोडेर मित्रता को हात बढाऊ । आज प्रेम दिबस मनाएर अर्को वर्षको दिबसमा त्यसै को दुस्मन बन्नु नपरोस। माया मा सधै जित हुन्छ , हार हुन्न। माया ले शरीर मा उत्साह दिन्छ , नैराश्यता कदापी दिदैन। समर्पण , त्याग र विश्वासमा माया बढी हुन्छ । प्राप्ति मा भन्दा पनि धेरै तर त्यो त्याग र माया लाई २ वोटा बाहिरी आखा ले होइन भित्री हृदय को आखा खोलेर हेर्नु र बुझ्नु जरुरि हुन्छ।
भगवान लाई हामी सधै किन पुजा गर्छौ थाहा छ ? किन कि , भगवान लाई हामी कहिलै प्राप्ति गर्न सक्दैनौ , देख्न सक्दैनौ त्यसैले नै भगवान प्रति हाम्रो सदैब माया , विश्वास र आशा रहन्छ। यदि भगवान हामीसंग आएर बस्ने , कुरा गर्ने थिए भने हामी र भगवान बीच को नै ठुलो असमजदारी पैदा हुन्थ्यो, त्यसैले भगवान ले मनुस्य जाति लाई पैदा गरेर उहाहरु आफै अर्कै ठाउँ मा जुन मनुस्य को पहुच भन्दा टाढा बस्नु भयो, किन कि उहा लाई थाहा थियो कि मनुस्य को जात सधै आफ्नै स्वार्थ हेर्छ पहिले अनि मात्र अरु को।
मेरो भन्नु को मतलब माया भगवान हो , भगवान माया हो , यसलाई महसुस गर्न सक्नु पर्छ अन्तर आत्मा बट नै। जसलाई यदि हृदयबाट माया गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पुजा गर्नुस सदैब , दुस्मन र दुस्मनी कहिलै नगर्नुस ।
करिब १३ लाख फ्यान पेज साथी हरु लाई यो भ्यालेन्टाइन डे को शुभकामना। माया , प्रेम र सदभाब बाडनुस , रिस र राग त्यागनुस आज बाट नै। खल्ती मा पेस्तोल बोकेर अनि मन मा घृणा बोकेर, बाहिरी आवरण मा मात्र गुलाब को फुल कसैलाई नदिनुस्। (रेखा थापाको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो)